Ezinụlọ Jizọs Si | Akụkọ Gbasara Isiji Ákwà
ISIOKWU TETA! A Ihe Ị Ga-eme Ma Mmadụ Nwụnahụ Gị
ISIOKWU TETA! A Mmadụ Iru Uju Ọ̀ Dị Njọ?
ISIOKWU TETA! A Ihe Ga-enyere Gị Aka Idi Ọnwụ Onye Nwụnahụrụ Gị
ISIOKWU TETA! A Otú Ị Ga-esi Akasi Mmadụ Obi
ISIOKWU TETA! A Ndị Nwụrụ Anwụ Ga-adị Ndụ Ọzọ
BAỊBỤL NA-AGBANWE NDỤ NDỊ MMADỤ M Na-akwanyeziri Onwe M na Ụmụ Nwaanyị Ùgwù
ṄOMIE OKWUKWE HA “Achọrọ M Iso Ya Laa”
GỤỌ NKE Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Aymara Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Batak (Toba) Bicol Bislama Bulgarian Cambodian Catalan Cebuano Chichewa Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chitonga (Malawi) Chitumbuka Chiyao Cibemba Cinyanja Croatian Czech Danish Drehu Dutch Efik English Estonian Ewe Fijian Finnish French Ga Georgian German Greek Greenlandic Guarani Gun Haitian Creole Hausa Hebrew Hiligaynon Hungarian Icelandic Igbo Iloko Indonesian Isoko Italian Japanese Javanese Kazakh Kikamba Kikongo Kikuyu Kimbundu Kinyarwanda Kirghiz Kiribati Kirundi Kongo Korean Kurdish Kurmanji (Caucasus) Kurdish Kurmanji (Cyrillic) Kwangali Kwanyama Lingala Lithuanian Luganda Lunda Luo Luvale Macedonian Macua Malagasy Maltese Mam Mambwe-Lungu Mauritian Creole Maya Mongolian Myanmar Nahuatl (Northern Puebla) Ndebele Ndebele (Zimbabwe) Ndonga Nias Norwegian Nzema Ossetian Otetela Papiamento (Aruba) Papiamento (Curaçao) Persian Polish Portuguese Quechua (Ancash) Quechua (Ayacucho) Quechua (Bolivia) Quechua (Cuzco) Romanian Russian Samoan Sango Sena Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Setswana Seychelles Creole Shona Silozi Sinhala Slovak Slovenian Solomon Islands Pidgin Spanish Sranantongo Swahili Swahili (Congo) Swati Swedish Tagalog Tahitian Tatar Telugu Tetun Dili Thai Tiv Tojolabal Tok Pisin Tshiluba Tshwa Tsonga Turkish Tuvaluan Twi Tzotzil Ukrainian Umbundu Venda Vietnamese Wallisian Waray-Waray Xhosa Yoruba Zulu
Ònye bụ nna Josef?
Josef bụ ọkwá nkà n’obodo Nazaret. Ọ bụ ya bụ nna Jizọs n’ụwa. Ma, ònye bụ nna Josef? Mgbe Matiu na Luk na-ede ezinụlọ Jizọs si, Matiu dere na nna Josef bụ Jekọb, ma, Luk dere na Josef bụ “nwa Hilaị.” Gịnịzi mere ihe Matiu dere ji dị iche n’ihe Luk dere?—Luk 3:23; Matiu 1:16.
Matiu dere, sị: “Jekọb amụọ Josef.” N’asụsụ Grik, ihe a o dere gosiri na ọ bụ Jekọb mụrụ Josef. Ihe ọ pụtara bụ na Matiu si n’ezinụlọ ndị nna nna Josef, bụ́ ezinụlọ Eze Devid, kpọrọ aha onye mụrụ onye ọ mụrụ rute na Jizọs. O si otú ahụ gosi na Jizọs ruru eru iketa ocheeze Devid.
Ma, Luk dere, sị: “Josef, nwa Hilaị.” Mgbe ụfọdụ, nna nwunye mmadụ hụ “ọgọ ya nwoke,” ya akpọọ ya “nwa” ya. Ọ bụ ụdị ihe ahụ ka anyị ga-agụta na Luk 3:27. E dere ebe ahụ na Shieltiel bụ “nwa Niraị.” Ma, nna mụrụ Shieltiel bụ Jekonaya. (1 Ihe E Mere 3:17; Matiu 1:12) Ọ ga-abụ na Shieltiel lụrụ nwa Niraị Baịbụl na-akpọghị aha ya, ya na ya abụrụzie ọgọ. Ọ bụkwa otú ahụ ka Josef si bụrụ “nwa” Hilaị, n’ihi na ọ lụrụ Meri nwa Hilaị. Ọ pụtara na Luk si n’ezinụlọ ndị nna nna Meri, bụ́ nne Jizọs “dị ka anụ ahụ́ si dị,” kpọrọ aha onye mụrụ onye ọ mụrụ rute na Jizọs. (Ndị Rom 1:3) Ihe ọ pụtara bụ na Baịbụl gwara anyị gbasara ezinụlọ e si mụta Jizọs, ma ndị ezinụlọ nna ya n’ụwa ma ndị ezinụlọ nne ya.
Olee ụdị ákwà na ihe e ji esiji ákwà e nwere n’oge ochie?
Ajị anụ e sijiri esiji a hụrụ n’ọgba d nso n’oké osimiri nnu. e dere na e sijiri ya tupu afọ 135
N’Izrel oge ochie na ná mba ndị gbara ya gburugburu, a na-eji ajị atụrụ, ajị ewu na ajị kamel emepụta ákwà. Ma, nke a kacha eji emepụta ákwà n’oge ahụ bụ ajị atụrụ. N’ọtụtụ ebe na Baịbụl, e kwuru gbasara atụrụ, ịkpacha ajị, nakwa uwe e ji ajị mee. (1 Samuel 25:2; 2 Ndị Eze 3:⁠4; Job 31:20) Ahịhịa e ji emepụta ákwà linin dị n’Ijipt nakwa n’Izrel. (Jenesis 41:42; Jọshụa 2:⁠6) Ọ ga-abụ na ndị Izrel anaghị akọ ogho. Ma, Baịbụl kwuru na ndị Peshia na-eji ogho eme ihe dị iche iche. (Esta 1:⁠6) Ákwà silk ­na-ada oké ọnụ, o yikwara ka ọ̀ bụ naanị ndị ahịa sí Eshia na-ere ya.​—⁠Mkpughe 18:​11, 12.
Otu akwụkwọ a kpọrọ Jesus and His World, kwuru, sị: “Ajị anụ na-enwe ụcha dị iche iche. E nwere ndị na-acha ọcha, nweekwa ndị tụrụ àgwà.” A na-esijikarịkwa ajị anụ esiji. A na-esi n’ụfọdụ eju enweta ihe na-acha odo odo e ji esiji ákwà. Ọ na-adakwa oké ọnụ. A na-esikwa n’osisi dị iche iche, mgbọrọgwụ, mkpá akwụkwọ, na ụmụ ahụhụ dị iche iche enweta ihe e ji esiji ákwà ka o jiwe oji, chawa ọbara ọbara, odo odo, ma ọ bụ anụnụ anụnụ.
Ị̀ Maara?​—⁠Ụlọ Nche nke 3 2016
Ị̀ Maara?​—⁠Ọktoba 2018